”နင်က ပရိတ်သတ် နဲ့ ရန်တိုက်ရုံတင်မဟုတ် ကျန်ခဲ့တဲ့သားအမိ ၃ယောက်ကိုပါအဖမ်းခံရအောင်လုပ်တာနော်ဒါလား ”ဆိုပြီး အောင်လကို ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ ရေမွန်ရဲ့ညီမ…….. – Cele Oscar
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်ရေမွန် ကတော့အမှန်တရားအတွက် ပြည်သူနဲ့ အတူတိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော် အောင်လကရေမွန်ရဲ့နာရေးကူငွေတွေအားလုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်သွားတဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိခင်နဲ့ညီမ ဖြစ်သူကိုသိန်း ၁ထောင်က မလုံလောက်သေးဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ အတွက်၊တေသူငယ်ချင်းတွေ အတွက်တော့မလုံလောက်ဘူး။လောကမှာ စောက်ဆံက အရေးမကြီးဘူး။အဲ့ဒါ ဘိုစော ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာ ချစ်ပေးပါ လောဘမကြီးပါနဲ့တော်ပြီလေဗျာ။အန်တီနဲ့ညီမလေးလုပ်စားတာသွားပါစေဗျာ ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကို ချစ်တယ်ဆို သူ့အိမ်မှာသူနေခဲ့တာအတူတူမနေခဲ့ပါဘူး သိချင်းရေးရင်ရေးပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်
အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီးရေမွန် ညီမလေးဖြစ်သူကအောင်လရေ နင်က ပရိတ်သတ် နဲ့ ရန်တိုက်ရုံတင်မဟုတ် ကျန်ခဲ့တဲ့သားအမိ ၃ယောက်ကိုပါအဖမ်းခံရအောင်လုပ်တာနော်ဒါလား တွတ်ပီ ကို ချစ်တာ ?ဒါလားတွတ်ပီ သူငယ်ချင်း?စောက်ရေးမပါတဲ့ အရက်သမား ကိုတွတ်ကို သဂြိုလ်တဲ့အချိန်တော့ အလောင်း​သဂြိုလ်ဖို့ အတွက် လိုက်သွားရပါတယ်။သူတင်ထားသလို ဘယ်သူနဲ့မှလဲဘာမှပတ်သက်မုှမရှိဘူးတလ ပြည့်တိုင်းနောက်ဘဝလေးမှာ အဆင်ပြေပြေ နေလို့ရအောင်လှူတန်းပေးတယ် ငါတို့လဲတင်နေတာပဲအခုချိန်ကျမှဘာလို့များအညှိုးတကြီးနဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလဲ ?
နာရေးကူငွေ သိန်း 1000 ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံထဲက နင်တို့မရလို့လား သိန်း 1000 ဆိုတာလဲနာရေးကူငွေနော် ငါ့အကိုနဲ့ကျန်ရစ်သူအတွက်ကျေကျေနပ်နပ်ထည့်ခဲ့ကြတာငါတို့အေးဆေးနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ အတွက်စျေးရောင်းစားတယ်။အမေက Notes သင်တယ် ဒါကိုဖင်ထယားပီး နိုင်ငံရေး မပါပါအောင်လုပ်တယ်သားကို thet တဲ့အမေဆိုပီးဖွတယ်အမေ့ကြောင့် thay တယ်ဆိုပီးပြောတယ်$ တလွဲတွေတင်ပီး ဆုံးတာ တနှစ်တောင် ပြည့်ခါနီးမှထကြောင်နေတာလဲ ?တွတ်ပီ တယောက်လုံး မရှိတော့တာမ လုံလောက်လို့လား?ဒီမိသားစုတွေ ကလေးပါမကျန်ဒုက္ခရောက်ပီးမသာပေါ်တော့ မှ နင်တို့ခွေးတသိုက်က ကျေနပ်ကြမှာလား ???အေးငါတို့တခုခုဖြစ်ရင်တော့ နင်တရားခံနော်ဆိုပြီး ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ေရမြန္ ကေတာ့အမွန္တရားအတြက္ ျပည္သူနဲ႔ အတူတိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။အဆိုေတာ္ ေအာင္လကေရမြန္ရဲ့နာေရးကူေငြေတြအားလုံးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္သြားတဲ က်န္ခဲ့တဲ့ မိခင္နဲ႔ညီမ ျဖစ္သူကိုသိန္း ၁ေထာင္က မလုံေလာက္ေသးဘူးလား။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္၊ေတသူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ေတာ့မလုံေလာက္ဘူး။ေလာကမွာ ေစာက္ဆံက အေရးမႀကီးဘူး။အဲ့ဒါ ဘိုေစာ ကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့တာ ခ်စ္ေပးပါ ေလာဘမႀကီးပါနဲ႔ေတာ္ၿပီေလဗ်ာ။အန္တီနဲ႔ညီမေလးလုပ္စားတာသြားပါေစဗ်ာ ပိုေကာင္းတဲ့ဘဝကို ခ်စ္တယ္ဆို သူ႔အိမ္မွာသူေနခဲ့တာအတူတူမေနခဲ့ပါဘူး သိခ်င္းေရးရင္ေရးေပးလို႔ရပါတယ္ဆိုၿပီး လူမႈကြန္ရက္မွာ တင္ထားလည္းျဖစ္ပါတယ္
အဲဒါနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေရမြန္ ညီမေလးျဖစ္သူကေအာင္လေရ နင္က ပရိတ္သတ္ နဲ႔ ရန္တိုက္႐ုံတင္မဟုတ္ က်န္ခဲ့တဲ့သားအမိ ၃ေယာက္ကိုပါအဖမ္းခံရေအာင္လုပ္တာေနာ္ဒါလား တြတ္ပီ ကို ခ်စ္တာ ?ဒါလားတြတ္ပီ သူငယ္ခ်င္း?ေစာက္ေရးမပါတဲ့ အရက္သမား ကိုတြတ္ကို သၿဂိဳလ္တဲ့အခ်ိန္ေတာ့ အေလာင္း​သၿဂိဳလ္ဖို႔ အတြက္ လိုက္သြားရပါတယ္။သူတင္ထားသလို ဘယ္သူနဲ႔မွလဲဘာမွပတ္သက္မုွမရွိဘူးတလ ျပည့္တိုင္းေနာက္ဘဝေလးမွာ အဆင္ေျပေၿပ ေနလို႔ရေအာင္လႉတန္းေပးတယ္ ငါတို႔လဲတင္ေနတာပဲအခုခ်ိန္က်မွဘာလို႔မ်ားအညႇိုးတႀကီးနဲ႔လိုက္တိုက္ခိုက္ေနတာလဲ ?
နာေရးကူေငြ သိန္း 1000 ဆိုတဲ့ ပိုက္ဆံထဲက နင္တို႔မရလို႔လား သိန္း 1000 ဆိုတာလဲနာေရးကူေငြေနာ္ ငါ့အကိုနဲ႔က်န္ရစ္သူအတြက္ေက်ေက်နပ္နပ္ထည့္ခဲ့ၾကတာငါတို႔ေအးေဆးနဲ႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႔ အတြက္ေစ်းေရာင္းစားတယ္။အေမက Notes သင္တယ္ ဒါကိုဖင္ထယားပီး နိုင္ငံေရး မပါပါေအာင္လုပ္တယ္သားကို thet တဲ့အေမဆိုပီးဖြတယ္အေမ့ေၾကာင့္ thay တယ္ဆိုပီးေျပာတယ္$ တလြဲေတြတင္ပီး ဆုံးတာ တႏွစ္ေတာင္ ျပည့္ခါနီးမွထေၾကာင္ေနတာလဲ ?တြတ္ပီ တေယာက္လုံး မရွိေတာ့တာမ လုံေလာက္လို႔လား?ဒီမိသားစုေတြ ကေလးပါမက်န္ဒုကၡေရာက္ပီးမသာေပၚေတာ့ မွ နင္တို႔ေခြးတသိုက္က ေက်နပ္ၾကမွာလား ???ေအးငါတို႔တခုခုျဖစ္ရင္ေတာ့ နင္တရားခံေနာ္ဆိုၿပီး ေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။